Uluhlu lwenkcazelo kaPatrick Mahomes ohlekisayo uyaphosa - Imidlalo Yenfl
Uluhlu lwenkcazelo kaPatrick Mahomes ohlekisayo uyaphosa
UPatrick Mahomes unokuba ngoyena mdlali webhola ekhatywayo obalaseleyo kwimbali yabagibi bebhola. Oko kudlulela ngaphaya kwamandla engalo kunye nokuchaneka. Kangangamashumi eminyaka, ii-quarterbacks zabonisa ukudlala nomqhubi kunye ne-putter. IMahomes inengxowa enkulu yeeklabhu.
I-Mahomes inomkhosi onzulu weentlobo zokujula kuyo nayiphi na i-quarterback esake sayibona-kunye nobukrelekrele bokuvavanya imeko kwaye wazi ngokuthe ngqo ukuba loluphi uhlobo olunokusetyenziswa. Xa i-Mahomes idlala i-quarterback, kukho okungakumbi kwisikhundla kunokuchonga iithagethi kwaye uzibethe. Uyabaqhatha aze abakhwankqise abakhuseli, ebarhwebeshela kwiindawo abahlala kuzo kufanele akwazi ukwenza umdlalo phambi kokuhambisa iipasi kwiithagethi zakhe ngendlela yokuyila, engalindelekanga, kunye neendlela ezididayo kwaphela. Kukho isizathu sokuba sikhethe ukubukela iMahomes ukubukela umatshini weJUGS. Umtshini awukwazi ukuqonda ngequbuliso ukuba kufuneka ukhuphe i-no-look pass ejikeleze umkhuseli.
Kansas City, le yeyakho. @PatrickMahomes : Ividiyo yoMculo oKhethekileyo oBonisiweyo
Asiyontsomi. Kwixesha lokuqala likaMahomes njenge-NFL eqala i-quarterback, waphosa i-50 touchdowns kwaye waphumelela i-MVP yeligi. Kwisizini yakhe yesibini, ngumdlalo kude nokuphumelela iSuper Bowl. I-arc yakhe yomsebenzi sele ikrazula isilingi, kodwa uhlala eqamba iindlela ezintsha zokuya phezulu.
NgoJanuwari ophelileyo, yam Ringer Umlingani uKevin Clark wabhala malunga indlela uMahomes ahlanganise ngayo ingxowa yakhe yokujula . NgoJanuwari, ndiza kukhupha iindidi ezahlukileyo zokuphosa kuloo bhegi. Ezinye zingooMahomes kuphela; abanye uyabathanda nje. Olu luluhlu lwenkcazelo kaPatrick Mahomes, indoda efumanise ukuba kukho iindlela ezingaphezu kwenye zokuphosa ibhola.
Abalandeli bebhola baqhelene ne-jump pass. Ngumdlalo wokukora apho umdlali okhubekisayo ebaleka esiya kumgca wokukrala phambi kokuba azise into eyothusayo: Endaweni yokuziphosela emfumbeni, uya kuphakama ngomzuzu wokugqibela kwaye aphose kumamkeli kwindawo yokugqibela. . Tim Tebow wenza lo mdlalo waduma , kunye noDerrick Henry yenziwe ngokugqibeleleyo kucofa phantsi kumdlalo wamagqibela kankqoyi. Ngumdlalo olungiselelwe iimbaleki, hayi abagibi. Ukujula ngokwawo ngokuqhelekileyo kukudada okufikelela kwithagethi yayo evulekileyo kuphela ngenxa yokuba ukhuselo luwile ukukhusela ukubaleka.
UMahomes kuphela komdlali endakha ndambona etsiba ejula ibhola kumgama oziyadi ezingama-20:
Kumdlalo weVeki ye-10 ngokuchasene neTitans, uMahomes ubalekela phambili, waqonda ukuba sele eza kugilana kumdlalo welinemen, kwaye aphakame ukunqanda ukuntlitheka kwipakethi yemizimba emikhulu. UJameis Winston uzame into efanayo ekuqaleni kweli xesha lonyaka, kwaye ividiyo ibonisa kutheni i-quarterbacks ingatsiki ngokubanzi ngelixa iphosa. Kunzima ukufumana amandla emva kokuphoswa emoyeni, kwaye ukuhamba ngeenyawo okungaqhelekanga kwenza ukuba ukutsiba kudlule kungenzeki ukuba kuhambelane.
Kodwa ukuphosa kukaMahomes kulungile ngokupheleleyo. Ibhola ayinazip yokudlula kweMahomes eqhelekileyo, kwaye i-spiral ayigqibelelanga. Kodwa ihamba iiyadi ezingama-20 kwaye iya kanye apho ifuna ukuya khona. Xa i-Mahomes ixhuma, umamkeli obanzi u-Mecole Hardman ubaleka ekunene ngelixa egadwe ngokuqinileyo ngumva wekona we-Titans u-Logan Ryan. UMahomes ulindele ikhefu likaHardman kwaye umkhokelela kude nomkhuseli wakhe kunye nendawo evulekileyo.
Kwipokotho ecocekileyo, uMahomes wayengena kwindawo yokuphosa, ekhokela ngonyawo lwasekhohlo. Kodwa kulo mdlalo akanandawo. Wagqiba olunye uhlobo lwee-Air Mahomes kwiVeki 7 touchdown ukuya Hardman —phantse ube ngathi usebenzisa ukutsiba endaweni yokunyathela xa engenandawo ingako yokusebenza.
Kuye kwaxelwa ukuba uMahomes waphosa i-94 mph ekhawulezayo yebhola ngexesha leentsuku zakhe zokudlala i-baseball . Ndicinga ukuba wayenokuchukumisa i-100 ukuba wayevunyelwe ukubaleka ukusuka kwisiseko sesibini ukuya kwinduli ngaphambi kokuba adubule esiya kwipleyiti yasekhaya.
Kuba enengalo enkulu kwimbali ye-NFL, uMahomes akasoloko kuthethwa ngaye njengembaleki. (Ubuncinci, wayengekho ngaphambili ukuba Ukubetha phantsi kweTitans Kodwa kwezinye iindawo zokugibisela, uMahomes usebenzisa isantya sakhe ukukhulisa iipasi zakhe. Thatha oku kucofa kwi-Byron Pringle ukusuka kwiVeki yesi-5:
Sivuyisana nawe @pringle_byron ekuqaleni kwakhe @NFL ukubamba phantsi #KStateFB ⚒ @Chiefs
— Ibhola ekhatywayo yase-K-State (@KStateFB) Nge-7 kaOkthobha, 2019
Le bhola ihamba ubuncinane yeemitha ezingama-30 emoyeni. Ukuba uMahomes wayeme ngxi xa eyiphosa, bekuya kufuneka i-arc ephezulu ukuhamba iiyadi ezingama-30, ngaloo ndlela inike abadlali basemva kweColts ixesha lokuvala ibhola. Kodwa uMahomes usebenzisa isantya sokukrazula kwakhe ukujula intambo. Ngokwe-akhawunti ye-Twitter ye-NextGenStats ye-NFL, IMahomes ibibaleka iimayile eziyi-15.61 ngeyure xa ephosa ibhola, isantya sekota sesibini esikhawulezayo ngexesha lokudlula kwe-touchdown kule nkathi.
UMahomes ayisiyiyo kuphela ikota enokuthi idlule ngelixa ibaleka, kodwa indibaniselwano yakhe yesantya kunye namandla okujula imenza akwazi ukukrazula iipasile kubamkeli bakhe ngeendlela oontanga bakhe abanako. Kufana nokubophelela i-howitzer phambi kololiwe.
Kukho inxalenye ye-pregame warm-ups xa i-quarterbacks ikhulula iingalo zabo ngokuphosa ngokuqhubekayo nzulu kunye nzulu. Kwisizini edlulileyo ndiye ndagubungela umdlalo weVeki yeshumi elinanye phakathi kweChiefs neRams, kwaye ngaphambili bendime malunga neemitha ezingama-20 ukusuka eMahomes njengoko ebehamba kule ndawo yesiqhelo. Andizange ndifune nokubukela umdlalo emva koko. Ndikhe ndawabona amanye ama-quarterbacks eshushu ngaphambili, kodwa ukubukela i-Mahomes iqalisa ibhola ekhatywayo esibhakabhakeni kunye ne-trebuchet encanyathiselwe kwi-torso yakhe yayisonwabisa ngakumbi kunemidlalo emininzi.
Ngethamsanqa, amaqela adlale umdlalo emva koko. Kwaye uMahomes wenza oku:
Ndiqinisekile ukuba kukho umntu oza kundixelela ukuba le ndlela yokupasa ayichukumisi. Emva koko, iTyreek Hill yayivulekile emva kokuba umkhuseli weRams wawa malunga nomgca we-50-yard. Ukuba uMahomes wayephose oku naphi na kwicala elikude lentsimi, ngekwakuvelise isiphumo esifanayo. Kwaye uninzi lwabanye abadlali beekota bayakwazi ukukhupha ibhola kwiiyadi ezingama-60. Nditsho URyan Tannehill angayenza .
Kodwa kukho into eyahlukileyo malunga nendlela uMahomes ayenza ngayo. Ukuba awundikholelwa, ndiyathemba ukuba nawe uya kuma ecaleni kukaMahomes njengoko efudumala ngenye imini. Uya kuqonda.
I-Lefty Shot Put
Ithetha into malunga noMahomes ukuba enye yezona zinto ziphosakele kakhulu emsebenzini wakhe ikwayenye yezona zinto zinomtsalane. Kwikota yesine yomdlalo we-2018 e-Denver, waguqula i-third-and-5 ngokuzalisa ukudlula kwesobunxele.
NDINESANDLA SASENXELE? @PatrickMahomes5 AYIYONENE.
: #KCvsDEN kwi-ESPN
melissa mccarthy kunye noPaul rudd
NFL (@NFL) 2 Okthobha 2018
Unokuxela kwikliphu ukuba iMahomes ayiyonyani. Ubi kakhulu ekujuleni ngesandla sakhe sasekhohlo kunesokunene sakhe. Ukuphosa kuyacotha kwaye akukho nto ijikelezayo. Uyihlakulela nje ibhola kwithagethi yakhe, njengembumbulu ebekiweyo. Kwanaxa uMahomes eqhelisela ukujula ngasekhohlo—yaye, ewe, uyakwenza uyayenza -ukupasa kwakhe akunamandla kangako. I-Mahomes ingcono kakhulu ekujuleni ngesandla sakhe esingalawulekiyo kunoninzi, kodwa hayi ngetoni.
Yintoni emangalisayo, ngokuqinisekileyo, akuyiyo ukuphosa ngokwayo, kodwa ubukho bengqondo ukwenza ukuphosa. UMahomes wayebalekela ngasekhohlo, nto leyo eyayinokwenza ukujula ngesandla sakhe sasekunene kube nzima. Wayesazi ukuba uVon Miller wayengekho kude emva kwakhe, kwaye uMiller-onobuchule kakhulu ekunyanzeni iimpumlo-wayenokunyanzela ukuba aphuphe ukuba wayeyikhuphele ibhola kwingalo yakhe yasekunene. Kwaye wayesazi ukuba akadingi ukujula okugqibeleleyo ukuze afumane ibhola e-Hill, owayengaphantsi kweeyadi ezili-10 ukusuka kuye kwaye engagadwanga.
Uninzi lweekota unako baye benza oku kuphosa kwasekhohlo. Kuphela ngabaMahomes abacinga ukuyenza loo nto.
I-Quarterbacks ijonge ngaphandle abakhuseli ngaphambi kokuphosa amashumi eminyaka, kodwa bakholisa ukujonga umamkeli wabo xa bekhulula ipasi. IMahomes ikuthathele kwinqanaba elitsha ukujonga abadlali basemva. Uyi-QB yokuqala ukugibisela iipasi kubadlali angabajongi nokubajonga.
Unokucinga ukuba ukupasa okungakhange kujongwe ngumcimbi nje wokwazi ukuba uphi umamkeli kunye nokuzithemba ngokwaneleyo ukuthembela ekujuleni. Kodwa ikwanzima ngoomatshini. Xa ephosa ipasi elingajongiyo, uMahomes akajongi nje into ekujoliswe kuyo—ukhomba umzimba wakhe wonke kwicala laloo mdlali ngaphambi kokuphosa umzimba wakhe komnye umntu.
Mahomes waqala ukuziqhelanisa nokupasa okungajongwanga eTexas Tech , apho umqeqeshi oyintloko uKliff Kingsbury wayecinga ukuba sisicwangciso esisemthethweni. Njengeqela leChiefs elixhasa u-Alex Smith, eMahomes licaphukile igqala lokuzikhusela uJustin Houston ngokujula iipasi zokungajongi xa uziqhelanisa. Kodwa eyona nto idumileyo yokuphosa iMahomes yafika ngo-2018 ngokuchasene neRavens . Ngokuqhelekileyo ukhetha ukuphosa i-no-look kwi-slant-flat indlela yokudibanisa-xa ekwazi ukujonga umamkeli kwiflethi kwaye azi kakuhle apho i-slant iya khona-kodwa lo mdlalo ochasene neBaltimore wahlukile. Ujula kumamkeli ogcinwe ngokungqongqo kwindlela enqumlayo ngelixa edanisa epokothweni. Akakwazanga ukuziqhelanisa nalomzuzu kuba wayengazi nokuba uphi yena iya kuba, ndiyeke umamkeli. Nakumntu owenza ukupasa okungajongwanga, iqondo lobunzima liphumile kwiitshathi.
UMahomes ayiseyiyo kuphela ingcaphephe yokupasa-i-quarterback yaseClemson engenayo uDJ Uiagalelei kutshanje waphosa omnye kwisikolo samabanga aphakamileyo zonke-star umdlalo . Kodwa lowo ibingumdlalo wesikolo samabanga aphakamileyo. I-Mahomes iphosa i-no-look passes, ngokuthe rhoqo, ngexesha lesenzo se-NFL ephilayo. (Nangona bekukho ubuncinane enye yeprofayile ephezulu iphosile .)
I Madden 2004 Glitch
UMichael Vick wayenjalo ayithinteleki ngokupheleleyo Madden 2004 , kuba wayengumntu opasileyo ochanekileyo kwaye ekwangoyena mdlali ukhawulezayo kulo mdlalo. Oku kuvumele amaqela anoVick ukuba onakalise abachasi: Abadlali bemidlalo banokubaleka uVick ukuya kumgca wokukrala ngaphambi kokuba baphose kubamkeli abavulelekileyo ngalo naliphi na ixesha umdlali ochasayo ethathe isigqibo sokukhusela uVick. Ngoko ngaphakathi Madden 06 , abadwelisi benkqubo bazama ukuphelisa oko kusebenze ngokufanelekileyo njengekhowudi yokukopela ngokunciphisa ubuchule be-quarterbacks ukuphosa kwiindawo kuphela abanokuzibona. I-EA Sports ikhuphe into entsha (kwaye ingathandwa ngendlela emangalisayo) ebizwa ngokuba yi-vision cone. Ukuba a Madden Umdlali ubaleke umva wekota ukuya kumgca weskrimmage, loo khowuni yombono womdlali iya kucutheka, isenze ukuba kube nzima ukuphosa nakubani na ngaphandle kwabamkeli ngokuthe ngqo kwindlela yokubaleka.
Ikhowuni yombono kaMahomes ayifihli. Unokubalekela ngasekunene kwaye aphose iibhombu emzimbeni wakhe ngasekhohlo:
Unokubaleka ukuya ekhohlo kwaye ajike ibhola emzimbeni wakhe ngasekunene:
Inkcazo ye-NFL NextGenStats yokuphosa ekubalekeni kukugqithiswa kuhanjiswe ngelixa uhamba ngesantya se-8 mph. I-Mahomes ine-22 enjalo yokuphosa i-touchdown ukususela ngo-2018; ayikho enye i-quarterback engaphezulu kwe-15. Idatha yokulandelela umdlali weligi ibonisa ukuba ipesenti yokugqiba i-QB iyancipha ngokukhawuleza ukuphosa ekubalekeni. I-Mahomes yinto engaqhelekanga.
UPatrick Mahomes uphose kwi-Run (8 + MPH ekudluleleni phambili) kwi-22.2% yemizamo kule nkathi, izinga eliphezulu phakathi kweekota zonyaka.
Ukugqitywa kwe-pct kaMahomes ihlala izinzile xa ibaleka ngelixa umyinge weligi uhla kakhulu. #NextGenStats #IinkosiUbukumkani
— Izibalo zeGen elandelayo (@NextGenStats) Ngo-Oktobha 12, 2018
Xa i-quarterbacks eqhelekileyo iphuma, ukukhusela kunokunqumla intsimi kwisiqingatha kwaye ukhathazeke ngokukodwa ngokukhusela indawo ukusuka kwi-sideline ukuya kumanqaku e-hash. NgeMahomes, wonke umntu owamkelayo uhlala elukhetho olusebenzayo ngamaxesha onke. Unokulushukumisa ngeenyawo ukhuselo lwakhe aze aluphose kwindawo olushiyileyo.
UMahomes uphose abadlali abangama-484 kule sizini. Bathandathu kuphela abaye bawiswa phantsi okanye emva komgca wokukrala. Kungenxa yokuba uMahomes uphosa ibhola ngeenxa zonke abakhuseli abazayo ngokusebenzisa uluhlu lwee-engile zokukhulula iingalo ezisecaleni:
SIDEARM SZN @PatrickMahomes
Ukujonga phantsi (@thecheckdown) NgoDisemba 23, 2019
Ababalekayo baqeqeshelwe ukuwisa amapasi ngokuphakamisa iingalo ubomi babo bonke bebhola ekhatywayo. Emva koko lo mfo uyeza aze akhuphe iibhola kwiindawo zokubeka apho iingalo zabo beziya kuba khona ukuba abaziphakamisi?
-Ty Wurth (@WurthDraft) NgoJanuwari 12, 2019
Kwikliphu engentla, it inkangeleko njengoMahomes ephosa i-curveball esecaleni, kodwa yinkohliso nje leyo. Okanye ndicinga njalo. Siza kukugcina uhlaziyiwe ukuba uMahomes ukhe wongeze ibhola eqhekekileyo kwingxowa yakhe yamaqhinga.
9 11 Imovie yomcimi-mlilo
Iimpawu zefowuni kumpu ophezulu
iiklabhu zasebusuku zaseasia nyc
Isikolo esihle sokubonisa inkwenkwe
kwenzeke ntoni kulwandle